Muxuu ka yiri Daniel Sturridge goolkii guusha ee uu ka dhaliyay xulka qaranka Wales? – Gool FM
Muxuu ka yiri Daniel Sturridge goolkii guusha ee uu ka dhaliyay xulka qaranka Wales?
Liibaan Fantastic June 16, 2016
(Paris) 16 Juunyo 2016 Daniel Sturridge oo ahaa dhaliyihii goolkii guusha ee galabta xulka qaranka ingiriisku uu ku adkaaday ayaa ka hadlay dareenkiisa kadib waqtigii dhimashada oo uu dhaliyay gool cajiib ah.
Sturridge ayaa sheegay inuu dareemayo dareen aan la rumaysan karin wuxuuna intaa ku daray inuu uga mahadcelinayo tababare Hodgson fursadii uu siiyaya galabta.
“Waa dareen aan larumaysan karin, waxaan uga mahadcelinayaa tababaraha fursadii uu i siiyay, ilaaheey ayaan uga mahadcelinayaa goolkii aan dhaliyay” ayuu yiri Daniel Sturridge.
“Wali waxaa noo haray hal kulan, sidaas darteed dhamaan waala xamaasadaysan yahay, waxaan doonaynaa inaan si awood ah ugu gudubno wareega kale anaga oo hogaanka u hayna guruubkeena”.
Waxaa xusid mudan in xulka qaranka ingiriisku uu hogaanka u haayo Guruub B kadib markii uu uruursaday 4 dhibic laba kulan oo uu ciyaaray, Wales iyo Slovakia ayaa leh min 3 dhibic halka Ruushku uu leeyahay kaliya hal dhibic.
Marcus Rashford oo jabiyay rikoor uu horay u haystay Rooney kadib kulankii Wales
Northern Ireland oo soo gabagabaysay rajadii Ukraine ee Euro 2016 kana gaartay guul taariikhi ah (SAWIRRO)